အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် သေနတ်ပစ်ခတ်အကြမ်းဖက်မှုမှ ပြည်သူများအား ကာကွယ်ရမည်ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြောကြား - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးအား ကာကွယ်ပေးသော မည်သည့်အစိုးရမဆို လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည့်အတိုင်း သေနတ်ပစ်ခတ်အကြမ်းဖက်မှုမှ ၎င်းတို့၏ ပြည်သူများအား ကာကွယ်သင့်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝမ်ဝန်ပင်းက ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ နေရာအများအပြား၌ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အရေအတွက် အမြောက်အမြား ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အသေအပျောက်များစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် မီဒီယာဖော်ပြချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝမ်ဝန်ပင်းက နေ့စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ တုံ့ပြန်ပြောဆိုရာတွင် ထိုကဲ့သို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အမေရိကန် Gun Violence Archives က ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်တွင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ် ၂၂၀ ခန့် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူ ၉၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အသေအပျောက် ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း အကြိမ်ကြိမ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်လို့ ပြောလိုပါတယ် ။ အမေရိကန်အစိုးရက အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ သေနတ်ပစ်ခတ်အကြမ်းဖတ်မှုတွေကို လျှော့ချဖို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုးထိရောက်တဲ့အစီအမံမျိုးကိုမဆို မလုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့် စိုးရိမ်စရာကောင်းသလို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။”ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝမ်ဝန်ပင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာတွင် သေနတ်ပစ်ခတ်အကြမ်းဖက်မှု အစိုးရိမ်ရဆုံးနိုင်ငံအနေဖြင့် သေနတ်ပစ်ခတ်အကြမ်းဖက်ခံရသူအရေအတွက်မှာ စံချိန်တင်မြင့်မားလာခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှအားဖြင့် နေ့စဉ် လူ ၁၂၂ ဦး သေဆုံးနေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသည့် ကလေးသူငယ်များ နှင့် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအရေအတွက်သည် အခြားဝင်ငွေမြင့်မားသည့် နိုင်ငံ ၃၁ နိုင်ငံ ပေါင်းစပ်ထားသည်ထက် ၁၅ ဆ ပိုများကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်အတွင်းမှာ အမေရိကန်အစိုးရက သေနတ်ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေမူကြမ်းကို ပြဌာန်းဖို့ နှောင့်နှေးခဲ့ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတွင်း အကြိမ်ကြိမ် လူအခွင့်အရေးအဖြစ်ဆိုးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားများသည် နောက်ထပ်အကြီးအကျယ်ဖြစ်စဉ် မကြုံမချင်း ချွေးသိပ်ရန် အနှစ်မပါ ဗလာသက်သက်ဖြစ်သော စကားလုံးများ သို့မဟုတ် တစ်ချို့သော ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာအဖြစ်အပျက်အား ပြဇာတ်တင်ဆက်ခြင်းများကိုသာ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ ပြောဆိုနေကြကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ပြည်သူတွေက သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့သားသမီး‌ကိုတောင် နေ့စဉ် သေနတ်နဲ့ ချိန်ခံနေရပေမယ့် ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာ အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးက ဘယ်မှာလဲဆိုတာ မေးလို့ မရနိုင်ဘူး ။ ”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားများက ၎င်းတို့ရဲ့ ပြည်သူများ သေဆုံးခြင်းအား စိတ်ဝင်စားမှု မရှိဘဲ အခြားနိုင်ငံများ၏အရေးတွင် မဆိုင်ဘဲ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေချိန်တွင် လူ့အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ဗိုလ်ကျစိုးမိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပိုပြီး အလေးထားသလားဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝမ်ဝန်ပင်းက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မူတွေကို တုံ့ပြန်ဖို့ ၊ သူတို့ရဲ့ဘဝတွေ လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ သူတို့ရဲ့ စားပွဲမှာ ထိုင်နိုင်ပြီးတော့ လမ်းတွေပေါ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ကျွန်တော်တို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒါက လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထားထိန်းသိမ်းတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့ လုပ်သင့်ပါတယ်။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua Editor: huaxia 2022-06-21 21:28:15
BEIJING, June 21 (Xinhua) — The United States should protect its people from gun violence, as any government that safeguards human rights should do, Chinese Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin said Tuesday.
He said that, faced with repeated human rights tragedies in their own country, the U.S. politicians only repeat hollow words to placate or stage some mourning events until the next deadly incident happens.
He questioned whether the American politicians care more about human rights or hegemony, when they are indifferent to the deaths of their own people but meddle in other countries’ affairs.
“This is whatagovernment that cares about and uphold